Irhoxisiwe: ICanvas kaFrank's Wite kwiKonsathi - Umthetho wokuvula: Mauricio Nader Oyoun | Ukucinga ngokutsha kwenkcubeko
« I-Squid Game Mini Ball ngu-Eros Ebony
HAVEN- Konke onako ukuBling kwiHolide ekhethekileyo nguMboniso weRadio yaseBerlin »
Umsitho uye warhoxiswa ngenxa yempilo yegcisa.
Isiganeko sarhoxiswa ngenxa yezizathu zempilo yigcisa.
Isiganeko siqala ngoMdlali weBass waseChile uMauricio Nader, oya kwenza isenzo sokuvula imizuzu engama-20 kunye neprojekthi yakhe eyedwa. Uya kucula iingoma ezi-5, kwaye uya kuba yedwa imvumi kwisenzo sakhe. Emva kwekhefu lemizuzu eli-10, ngoko kuza isenzo esiphambili esiyi-duo yabasetyhini baseChile "I-Canvas emhlophe kaFrank" eyenza ikhonsathi yabo yombane yeyure enye. Baza kudlala iingoma ezili-11 kunye ne-encore yengoma enye ngaphezulu.
→ Iingcango zivuliwe: 19:30 p.m.
→ Qala: 20 h
→ Ulwazi oluninzi malunga namatikiti kunye nobhaliso Apha.
I-ARTivisten eV, i-NGO efunyenwe ukudala indawo yamagcisa, ama-acivists kunye nenkxaso ngokubanzi nawuphi na umntu onemibono yokuyila kunye namanyathelo kungakhathaliseki imvelaphi yakhe, isini, ulwimi kunye nezakhono zonxibelelwano, ngokuzingca unikezela ezimbini eziphezulu.
igcisa elisemgangathweni kumsitho omnye walo Lwesihlanu we-19 kaNovemba ka-2021: I-Canvas emhlophe kaFrank kunye noMauricio Nader baya kudlala ngqo e-Oyoun eBerlin. I-Canvas emhlophe kaFrank yi-duo yabasetyhini ezelwe ngenjongo yokudala umculo ohambisa umyalezo okrwada kunye nothe ngqo kuluntu. Injongo yebhendi kukuvelisa ithemba ebantwini nokubakhapha kumzabalazo wabo wobuqu. Ixesha elidlulileyo lishiya amanxeba, kodwa "i-canvas emhlophe" iya kuhlala ikhona, indawo apho unokuphinda ubhale ibali lakho kwaye uzobe indlela entsha Kumsebenzi wabo omfutshane, baye badlala kwiindawo ezifana neMad Cool Festival yaseSpain kunye neLollapalooza Chile njenge kunye nokukhenketha i-USA, iYurophu kunye neChile yonke. Ngecwecwe labo elisanda kukhutshwa elithi "Ubomi bam, iCanvas yam", eveliswe eLondon nguDimitri Tikovoï (Indawo, iBlondie, uCharli XCX), kwiNarcissus Studio, uFrank's White Canvas uphumelele imbasa ye "Rock Artist of the Year" kwiPremios Pulsar 2021. , "Icwecwe lecwecwe elihle kakhulu lika-2020" kwiRadio Futuro kunye "neAlbhamu Yonyaka" e-iRock, kunye nokuba liqweqwe lemagazini yeRockaxis ngoDisemba 2020. UMauricio Nader ngumqambi waseChile, umdlali webass kunye nomvelisi womculo oseBerlin. Ukuthanda kwakhe ii-bass zombane kumkhokelele ekubeni enze irepertoire eyedwa enesitayile esikhethekileyo, esiqulathe iziqwenga ezivela kwirepertoire yakudala nedumileyo, kunye neengoma zakhe kwaye azidlale ngesazisi sakhe kunye neemvakalelo. Nguye ophumeleleyo
wePulsar Prize 2017, kwaye wenze iikhenkethi ezininzi kwilizwe lakhe nakwilizwe lonke laseYurophu.
Igama: ARTivsten eV
Igama: Ikhanvasi emhlophe kaFrank
Igama: Mauricio Nader
E-Oyoun, akukho ndawo yocalucalulo ngokwesini, i-queerphobia, i-transphobia, naluphi na uhlobo lobuhlanga okanye ucalucalulo olunjengokuchasana noMnyama, ukuchasana namaSilamsi okanye ubuhlanga obuchasene nobuYuda, kunye naluphi na uhlobo lobundlobongela okanye ubundlongondlongo. I-Oyoun inikezela ngendawo ekhuselekileyo kubo bonke, iforamu evulekileyo yengxoxo kunye nendawo apho sixhasana kwaye simelane. Ukuba kukho umntu / into ekukhathazayo ngexesha lomsitho, nceda uqhagamshelane nelungu labasebenzi bethu abakhoyo ukuze bancede! Ukuba ufuna ukwabelana ngamava nathi emva komsitho, nceda usibhalele i-imeyile> awareness@oyoun.de okanye usithumelele umyalezo ongaziwayo ngewebhusayithi yethu: oyoun.de/awareness.